काठमाडौँ –के कुकुर बिराला पनि मानिसजस्तै दायाँ वा बायाँ हाते हुन्छन् ? यदि अनुसन्धानको परिणामलाई आधार मान्ने हो भने यसको उत्तर ‘हो’ हुन्छ । कतिपयलाई यो विश्वास नलाग्न सक्छ ।
यसका लागि अहिलेसम्म दुईवटा अध्ययन भएका छन् । पहिलो अध्ययन टर्कीको अटातर्क विश्वविद्यालयले सन् १९९१ मा गरेको थियो । उक्त अध्ययनले घरपालुवा बिरालाहरू ५० प्रतिशत दायाँ हाते (पन्जा), ४० प्रतिशत बायाँ हाते र १० प्रतिशत दुवै पन्जा बराबर प्रयोग गर्न सक्ने तथ्य पत्ता लगाएको थियो ।
सन् २००६ मा म्यानचेस्टर विश्वविद्यालयले कुकुरहरूको बारेमा अध्ययन गर्यो । उक्त अध्ययन अनुसार ५० प्रतिशत दायाँ हाते र ५० प्रतिशत कुकुरहरू बायाँ हाते हुने तथ्य सार्वजनिक भएको थियो ।
कुकुरबिरालाको दायाँ पन्जा चल्छ कि बायाँ भन्ने पत्ता लगाउन मान्छेको जस्तो सजिलो छैन । यसका लागि धेरै टेस्टहरू गर्नुपर्छ ।
जस्तै यिनीहरूले धेरैजसो कुन पन्जा चलाउने गर्छन् ? यदि यी जनावरहरू उत्तानो परेर खेलिरहेका छन् र पन्जाले नपुग्ने ठाउँमा केही राखिदियो भने पहिला कुन पन्जा अघि सार्छन् ? यदि यिनीहरू घरभित्र आउन चाहे भने कुन पन्जाले ढोका चिथोर्ने गर्छन् ? यस्ता प्रश्नहरूको लामो समयसम्म अध्ययन हुन जरुरी हुन्छ ।
यी बालबालिका, जसले 'डोरी नाघी' खेल्न मरेको सर्प प्रयोग गर्छन ...
मम नामः कुरैशी : भारतको एक संस्कृत विद्यालयमा ८० प्रतिशत विद्...